विराटनगर, १५ असोज । नेपालको चर्चित स्ट्याण्ड अप कमेडी शो नेपग्याजम पहिलो पटक पूर्वाञ्चल आउने भएको छ । नेपग्याजम विराटनगर र दमकमा आयोजना हुने स्ट्याण्ड अप कमेडी शो ‘अब हाँस्ने छ विराटनगर’ र ‘अब हाँस्ने छ दमक’ मा आफ्नो हास्य प्रस्तुति दिन आउन लागेका हुन् ।
एस. के. एस म्यानेजमेन्टद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा नेपग्याजमका चर्चित कलाकार लेखमणि त्रिताल, डोरेस खतिवडा र सरोज भण्डारीको प्रस्तुति रहने छ । ‘अब हाँस्ने छ दमक’ यही आउँदो असोज १७ गते शुक्रबारको दिन कन्काई पार्टी प्यालेस दमकमा हुने भएको छ । र, ‘अब हाँस्ने छ विराटनगर’ असोज १८ गते शनिबारको दिन वीरेन्द्र सभा गृह विराटनगरमा ३ः३० बजेदेखि शुरु हुने भएको छ ।
शोको टिकट मूल्य ३०० रुपैयाँ राखिएको छ । टिकट दमकस्थित कन्काई पार्टि प्यालेस, विराटनगरस्थित दीव्य रत्न होटेल वा कार्यक्रम आयोजित स्थानमा नै सोही दिन पाइने कार्यक्रमका संयोजक दिवस पौडेलले जानकारी दिएका छन् । नेपग्याजमले देश तथा विदेशमा प्रत्यक्ष्य तथा युट्युब भिडियोमार्फत स्ट्याण्ड अप कमेडी शो गरेर ख्याति कमाएका छन् ।